Mbido AKOTKỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ Italiantali Manuel Locatelli nwa akwukwo n'akwukwo ihe omuma
Akwụkwọ akụkọ anyị bụ Manuel Locatelli na-agwa gị eziokwu gbasara akụkọ nwata ya, Ndụ Mbido, Ndị nne na nna, Ezinụlọ, Nwanna (Mattia), Nwanne nwanyị (Martina) na Nwunye (Thessa Lacovich). Dika ozo, ndu ndi Italia, Ndụ nke Onwe na andtọ Net wdg.
Na nkenke, edemede a nwere Full History of Euro 2020 sensory, ndị bọọlụ gbahapụrụ ozugbo AC Milan. Lifebogger malitere Akụkọ nke ya site na nwata (na Lecco), rue mgbe o nwetara ihe ịga nke ọma na football.
Iji mee ka agụụ autobiography gị sie ike na ọdịdị Manuel Locatelli's Biography, anyị lere ya anya na ọ ga-ewetara gị Osisi Oge Ochie na Successga nke Ọma. Lee, nchịkọta nchịkọta nke Ndụ njem ya.
Manuel Locatelli Biography - Lee Ndụ Mmalite Ya na Ọganihu Ya Akụkọ:
Ee, onye ọ bụla maara na Midfielder zuru ezu bụ nwoke nke oge ahụ mgbe ọmalichara mmalite na asọmpi Euro 2020. Dabere na BBC, ihe mgbaru ọsọ ya nyeere Italytali aka ịbụ otu egwuregwu mbụ ga-eru ọkwa knockout nke European Championship.
N'agbanyeghị nkwanye ugwu na ịnyefe mmasị metụtara aha ya, anyị ghọtara na ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-agba bọl agụla akwụkwọ Manuel Locatelli's Biography. Maka nke a, anyị abịala ọrụ gị. Ugbu a na-ebutụbeghị, ka anyị bido.
Manuel Locatelli Storymụaka Akụkọ:
Maka ihe ndị na-ebido Biography, ọ na - aza aha - “ọhụrụ Pirlo“. A mụrụ Manuel Locatelli na 8th nke Jenụwarị 1998 nne ya, Simona Locatelli na nna, Emanuele Locatelli, n'obodo Lecco, Italy.
Ndị footbaltali ịgba ọsọ Italiantali bịara ụwa dị ka nwa ikpeazụ amụrụ, ma ọ bụghị nke a maara dị ka nwa nke ụlọ ahụ. Manuel bụ otu n'ime ụmụ atọ - ya onwe ya, nwanne nwoke na nwanne nwanyị amụrụ site na njikọ dị n'etiti nne na nna ya (Emanuele na Simona) ndị esere ebe a.
Zute Manuel Locatelli Ndị nne na nna - papa ya (Emanuele) na mama m (Simona). Chọpụtala na ọ nwere karịa nke nne ya?
Mgbe ọ bụ nwatakịrị, obere mmasị Manuel nwere mmasị na ntụrụndụ nke ịkụkọ bọl mpaghara na nwanne ya nwoke nke okenye, bụ Mattia Locatelli. Mmasị n'egwuregwu ahụ buru oke maka ụmụ nwoke niile maka ndị nne na nna na-akwado ha - ọkachasị Emanuele (papa ha).
Little Manuel Locatelli (n'aka ekpe) sere onyinyo ya na nwanne ya nwoke, Mattia. Dika umuaka, ha abua nwere obi uto maka football.
Ekwuru eziokwu, enwere ncheta nwata ndị ọzọ Manuel Locatelli chọrọ ịdebe. Ncheta ya na Mattia na Martina laghachiri, n'agbanyeghị afọ ole ha dị. A chịkọtara ụdị ihe a na nke ọzọ karịa nke a nwanne bonding foto.
Ọbụbụenyi dị n'etiti Mattia, Martina na Manuel bụ mmekọrịta kachasị ogologo ndụ ha.
Ezigbo Ezinụlọ Manuel Locatelli:
Onye na-eme egwuregwu na-alụ ọgụ sitere na mmalite dị umeala n'obi - na ezinụlọ nke ụdị ndụ ya na-adabere na football. N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, ụmụ nwoke nile nke ezinụlọ Manuel Locatelli nọ na bọl.
Ezigbo ezinụlọ nke Manuel Locatelli. Site n'aka ekpe gaa n'aka nri; Emanuele, Mattia, Martina, Simona na Manuel.
Nna Manuel Locatelli, Emanuele bụ onye nchịkwa football. N'ụzọ na-akpali mmasị, ọ bụ onye nkụzi bọlbụ nke ụmụ ya nwoke abụọ nwere. Emanuele kụziri Manuel na Mattia, n'okwu ọnụ, na Pescate, obodo dị na ndịda Lecco.
Ka oge na-aga na ndụ, Emanuele hapụrụ ọrụ nchịkwa ya ka ọ rụọ ọrụ dị ka onye na-azụ ego. N'aka nke ọzọ, nne Manuel Locatelli bụ nwunye ụlọ. Ha na Simona na Emanuele na ndi ezi na ulo.
Ebe ndị ọgba bọọlụ si, Lecco bụ obodo nke ihe dịka mmadụ 48,131 bi na ya na mpaghara Lombardy nke dị na mgbago ugwu Italy.
Obodo ahụ bụ ebe obibi ndị njem Italiantali - njem, njem ụgbọ mmiri na njem nlegharị anya wdg. Ndị nne na nna Manuel Locatelli biri maka ụlọ nke dị nso na ọdọ mmiri ahụ.
Echefula, mpaghara a metụtara oke ọrịa COVID-19 - na mbido 2020.
Ha bụ ihe kpatara Italytali jiri kwupụta mkpochi mba. Dika ozo, gini mere Healthtù Na-ahụ Maka Ahụ Ike declaredwa (WHO) kwupụtara Covid-19 ọrịa na-efe efe - na 11th nke March 2020.
Manuel Locatelli Mmụta:
Dị ka ọ dị n'resttali ndị ọzọ, ịga ụlọ akwụkwọ na Lecco bụ ihe a manyere site na 6 ruo 16 afọ. Ndị nne na nna Manuel Locatelli (Simona na Emanuele) hụrụ na ahapụghị ụmụ ha.
Manuel Locatelli (n'etiti) na ụmụnne na-akwado ịga ụlọ akwụkwọ.
Ndị Italiantali na ụmụnne ya, Mattia na Martina na-ese onyinyo n'elu na-ebu akpa ha ma na-akwado ịkụ ụlọ akwụkwọ.
Diọkpara, Martina kpebisiri ike iru ogo agụmakwụkwọ kachasị elu (nweta PhD). Mụnna ahụ, Manuel na Mattia mechara kwụsị ịga n'ihu na agụmakwụkwọ ha - niile maka football.
Manuel Locatelli Football Akụkọ:
Ya na nwanne ya nwoke, Mattia tọrọ ntọala maka nrọ ha na Oratory, nke dị n'obodo Pescate. Ọ bụrụ na ị maghị, Oratory bụ obere ụlọ ụka (na Chọọchị Roman Katọlik), nke a na-ekwu maka ofufe onwe onye.
Ebe a Manuel mụrụ bọl dị, ọ bụ naanị nkeji isii site na etiti obodo Lecco, ebe ezinụlọ ya biri. Pescate na-enye ubi kacha mma maka igwu bọọlụ mpaghara. Emanuele Locatelli kụziiri ụmụ ya ndị nwoke na ụmụaka ndị ọzọ na Pescate ọzụzụ.
N'oge ọ bụ nwata, Manuel gosipụtara onwe ya n'etiti ụmụaka ndị ọzọ na-agba bọl (gụnyere nwanne ya nwoke) - ndị nna ya kụziri ha niile.
N'ihi ikike ya, Olginatese, otu ụlọ ndị na-agba bọọlụ Italiantali dị na Olginate, Lombardy nwetara ya.
N'ụlọ ọhụrụ ya, Manuel gosipụtara onwe ya dị ka ọ bụghị naanị ịbụ onye mmeri-egwuregwu kama na-enyere agụmakwụkwọ aka ịnakọta utu aha. Ọ bụrụ na ị maghị, ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ pụtara ìhè na 2004 Epiphany Tournament.
N'okpuru ebe a bụ mpempe akwụkwọ foto. A na - ahụ nwatakịrị ahụ na uwe Olginatese ya - dịka ọ na-enye ya onyinye site na Giampaolo Redaelli, onye isi oche na-asọpụrụ nke klọb - niile maka ekele ya na 2004 Epiphany Tournament.
Manuel nọgidere na-enwe obi ụtọ n'ụlọ akwụkwọ football Olginatese. Ọ na-egwuri ebe ahụ dị ka onye na-egwu egwu n'etiti 2003 na 2005.
Atalanta BC nchọpụta:
Kemgbe ọ meriri asọmpi Epiphany, nwata ahụ ghọrọ isiokwu nke mmasị sitere na ndị Scouts si nnukwu ndị otu Italiantali - na Serie A. Otu n'ime ha bụ Paolo Rota, onye na-egwu egwuregwu si Atalanta BC.
Ebe ọ bụ na Paolo Rot bi na Locco, ọ dịrị ya mfe ịchọpụta talent mpaghara na mpaghara ahụ. Nke a bụ otú o si chọpụta Manuel.
Mgbe nwa nwoke ahụ chọpụtara na nwa nwoke ahụ nwere nnukwu talent, ndị na-agụ akwụkwọ n'ógbè ahụ gara n'ihu iji mee ka ndị mụrụ Manuel Locatelli kwenyesie ike na Atalanta nwere mmasị n'ebe nwa ha nwoke nọ.
Paolo Rota na Emanuele gara Bergamo (obodo Italiantali), ebe Manuel na Atalanta nwere ikpe na-aga nke ọma. Mgbe ọ dị afọ itoolu, nwata ahụ debanyere aha ya na klọb mgbe ọ gafesịrị ule football ya.
Manuel toro na nnukwu ụlọ akwụkwọ bọl na agụmakwụkwọ Atalanta. A maara ya nke ọma maka nnukwu ọrụ ọ na-arụ na ịme ka bọlbụ banye na ụgbụ.
Na vidio dị n'okpuru ebe a, ngwa agha ọ na-enweghị ike ịgbagha agbagha kwụsịrị onye mgbachitere na-emegide ya, bụ onye hụrụ ụgbụ ahụ aza n'azụ ya.
Mgbe nwa okorobịa Manuel tụbara ihe mgbaru ọsọ ya kachasị mma, ọ raara ya nye ezinụlọ ya dum - ndị mụrụ ya, nwanne ya (Mattia) na nwanne nwanyị, Martina. Nke a bụ maka ha, ndị mmadụ na-ekwenye na nrọ ya mgbe niile ma na-akwado ya n'oge ọ bụla.
AC Milan AClọ akwụkwọ:
Tụ ụdị ụdị ebumnuche a, nke mere ka ndị egwuregwu niile gbagoro n'ụkwụ bụ ihe ama na-egosi na nke kacha mma ka ga-abịa. N'oge na-adịghị anya, Manuel malitere ịdọrọ ndị AC Milan scouts.
Locatelli kpebiri ịhapụ Atlanta CB n'ihi na klọb ahụ ejighị n'aka. N'oge ahụ, otu ọgụ na-adịghị agbanwe agbanwe ma ọ bụ nke a na-amụtabeghị ọgụ mere na njikwa ha.
AC Milan jiri ohere ahụ zuru ohi Atalanta dị oke egwu n'ihi ọrụ nke onye nchịkwa ha bụ Mauro Bianchessi.
Iningbanye na ndị dike wastali bụ nrọ nke mezuru Manuel, onye (ya na ezinụlọ ya) bụ onye na-akwado Rossoneri mgbe niile.
Nwatakịrị ahụ mere ihe ngwa ngwa iji nwee obi ụtọ na onye ntorobịa AC Milan. Site n'ime nke ahụ, mba mba.
Ọ theụ nke ezinụlọ Manuel Locatelli, nwa ha nwoke (mgbe ọ dị afọ iri na ụma) kpọrọ ndị otu ndị ntorobịa mba Italiantali - mgbe ha merisịrị ọlaọcha (n'elu).
Ulo akwukwo AC Milan bilie:
N’oge ya na AC Milan Primavera, Manuel Locatelli guzobere omume nke ịta amụrụ ma klọb na ndị nkuzi mba, gụnyere ndị egwu.
Nke ukwuu nke mere na ọ tụlere ya ma họpụta ya onye isi nke klọb ya na obere otu mba. N'oge a, nwata a nwetara aha otutu - "onye nduzi nke ọdịnihu."
Echere na ịnọ n'etiti ndị na-agba ọsọ na-eto eto kachasị elu n'ụwa, Manuel Locatelli nwetara nnukwu otuto site na The Guardian (na 2015).
Medialọ ọrụ mgbasa ozi kpọrọ ya dịka otu n'ime ndị isi 50 kachasị mma na-eto eto n'ụwa bụ ndị a mụrụ na 1998. Aha ndị ọzọ a ma ama na ndepụta Guardian gụnyere; Dayot Upamecano, Nke Spanish Dani Olmo, United States' Christian Pulisic na nke Argentine Federico Valverde.
Manuel Locatelli Biography - tozọ Na-aga nke Ọma Akụkọ:
N'ihi ọrụ ya mgbe ọ na-eto eto, usoro ikpeazụ nke ụlọ akwụkwọ ọta akara Rossoneri ghọrọ ihe dị mfe maka onye na-eto eto. Yana yana Gianluigi Donnarumma na Cutrone, Locatelli bịanyere aka na nkwekọrịta mbụ ya na Milan na ọnwa nke July 2015.
Arsene Wenger Mmasị:
Mgbe m gụsịrị akwụkwọ na agụmakwụkwọ, Manuel Locatelli gara n'ihu na njem ya - ugbu a ya na ụmụ nwoke AC Milan. Ọdịdị nke etiti ya dọtara otu nwoke, Arsene Wenger (nke gara aga Arsenal nchịkwa) onye zipụrụ onye isi ya bụ Neil Banfield ka ọ gaa Italytali ka ọ lelee ya anya.
Ahụhụ Manuel Locatelli Ahụhụ - Mgbe ọ na-aga siri ike:
O bu ihe nwute, nrigo ya n'ime ndi otu ndi okenye zutere ihe mgbochi nke fọrọ nke nta ka ọ gbuo ọrụ ya niile. Dị ka Stephan El Shaarawy, Manuel tara ahụhụ site na azụ azụ azụ inuryury - nke mere ka ọ pụọ na football - ruo ọtụtụ ọnwa.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ oge abụọ, nwatakịrị ahụ dara ogbenye n'ụzọ dị ukwuu hapụrụ na ihe fọrọ nke nta chefuo site AC Milan. Nke a bụ oge ụlọ ọgbakọ Rossoneri furu efu ọtụtụ akụkọ ifo (Pirlo, Nesta, Gattuso, Seedorf). N'ụzọ dị mwute, ha enweghị ike ịnya isi maka obere ikike ha dị na agụmakwụkwọ.
The AC Milan Nraranye:
Site na nsogbu ọrụaka na-akụ klọb tinyere nrụgide ịrụ, Manuel Locatelli ghọrọ a nyefee scapegoat.
N'oge ọkọchị nke 2018, AC Milan mere mkpebi mere ka ọ nwee mmetụta na ọ raara ya nye. Klọb ahụ kpebiri ịgbazinye ego na nke Chelsea Tiémoué Bakayoko ma mee ka Locatelli sonye n'òtù Serie A dị ala.
Ọ bụ ezie na Rossoneri họọrọ nhọrọ mgbazinye ego, onye iwe Locatelli kpaliri maka nnyefe zuru ezu. O kwetara ịhapụ ụlọ ọgbakọ ahụ mgba okpuru na a achọpụta na enweghị ntụkwasị obi. N'ikpeazụ, ọ kwetara iso Sassuolo gbazinye ego na ọrụ ịzụ.
Manuel Locatelli Biography - Akụkọ Successga nke Ọma:
Na-esote oge mmalite mara mma na Black na Greens, ụlọ ndị Italy kpebiri ịzụta ya (na azụmahịa na-adịgide adịgide) site na AC Milan. Ugbu a nwoke nwere obi ụtọ, Manuel Locatelli kwụghachiri okwukwe onye nkụzi Sassuolo, Roberto De Zerbi gosipụtara ya.
O nwetara ihe niile azụ. NA-ASỌP ,R V, Mmeri, isi na ihe mgbaru ọsọ ya.
Mana kama ịda, Manuel Locatelli si n'ike n'ike gaa ike, na-eme ka ọ bụrụ kpakpando bọlbụ na usoro ahụ. Ihe omumu Loca (aha ozo ya) ghọrọ onye ndu Sassuolo na ebe ntinye aka nke ndi otu ya.
Nke a bụ vidiyo nke Manuel Locatelli's Sassuolo - tupu ya enweta aha na Euro.
N'ịbụ onye nwere àgwà nke onye na-egwu egwuregwu miri emi, Manuel hụrụ onye isi mba otu Italiantali - Roberto Mancini. N'ịbụ ndị ọ joyụ nke ndị mụrụ ya na ndị òtù ezinụlọ ya, a kpọrọ ya (na Sept 2020) ka ọ bụrụ onye mbụ ya na ndị otu ndị okenye Italy.
Ọrụ Euro 2020:
Na June 2021, Roberto Mancini gụnyere Manuel Locatelli na onye otu ibe ya na Sassuolo Domenico Berardi na ndi otu ndi Italy maka UEFA Euro 2020. Oku ya biara mgbe o meruru aru Marco veratti.
O juru ndị agbụrụ obodo anya, ọ ghọrọ nwoke isi nke Italytali maka asọmpi otu egwuregwu.
Na 16 June 2021, Locatelli mere ya ihe niile maka bytali site na itinye goolu abụọ n'ime asọmpi nke abụọ nke secondtali, mmeri 3-0 megide Granit XhakaSwitzerland. Hụ ihe ngosi vidiyo ebe a.
O doro anya na ndị na-agba bọl na-achọ ịhụ onye ọzọ Xavi Hernandez ma ọ bụ ma eleghị anya, Zidine Zidane na-eme ka ụzọ ya bụrụ onye na-etiti ụwa.
Manuel Locatelli bụ otu n'ime ihe kachasị mma na talent na-adịghị agwụ agwụ na-abịa site na Italian Football Federation. Ndị ọzọ, dị ka anyị na-ekwu banyere Biography, bụ akụkọ ihe mere eme ugbu a.
Nwunye Manuel Locatelli - Thessa Lacovich:
You nọ ebe a inweta ozi gbasara onye na-egwu egwuregwu nwere ọtụtụ onyinye? You nwere agụụ na-agụsi ike ịchọpụta onye enyi nwanyị na nwunye Manuel Locatelli ga-abụ?
Onye ahụ abụghị onye ọzọ karịa Thessa Lacovich - nwanyị nwere ọmarịcha mma. Site na ihe anyị chịkọtara, ụzọ ịhụnanya (dị n'okpuru ebe a) nọ na ibe ha kemgbe 2016.
Zute nwunye Manuel Locatelli ka ọ bụrụ. Thessa Lacovich bụ ịhụnanya maka ndụ ya.
Ezinụlọ Thessa Lacovich nwere mgbọrọgwụ na South America - kpọmkwem Costa Rica. Mgbe ọ kwagara Italytali, ọ malitere ụlọ akwụkwọ na nnukwu obodo. Manuel zutere ya tupu ya enweta nkwekọrịta ọkachamara ya na AC Milan.
Site na nke a, Thessa Lacovich nọnyeere di ya ka ọ bụrụ, n'ọnwa nke nhụjuanya ya na n'oge AC Milan kwupụtara na ọ achọghị.
Dị ka oge ịmepụta Manuel Locatelli's Biography, Thessa bụ ugbu a BSc Holder na Mahadum Katọlik nke Dị Nsọ, Milan.
Ọ bụ onye gụsịrị akwụkwọ na Mgbasa Mgbasa Ozi. N'ihe dị ka June 2021, Wag ahụ mara mma na-arụ ọrụ dị ka ndị ọrụ mgbasa ozi Digital Communication.
More banyere nwunye Manuel Locatelli - Thessa Lacovich:
Na-egbochi ịbụ nwanyị nwere mma na ụbụrụ, ọ na-arụsi ọrụ ike n'ihe omume ntụrụndụ ya.
Ilekọta otu ogige ịnyịnya na-achọ nnukwu nkwa. Otú ọ dị, o yiri ka Thessalon enweghị nsogbu na nke ahụ. Ọ na-achọta oge iji kwado di ya yana ilekọta nkịta ha.
Thessa Lacovich na-akwado di ya oge niile. O nwere obi uto n'ilekọta nkịta ha ma jiri ịnyịnya na-egwuri egwu.
Obi abụọ adịghị ya, Thessalonia na Manuel nọgidere bụrụ otu n'ime ndị lụrụ di na nwunye kwenyesiri ike ruo n'oge football nke Italiantali.
Hmmm… Na-ekpebi otu nnụnụ ịhụnanya abụọ a si aga, Lifebogger kwenyesiri ike na Loca ga - n'oge na - adịghị anya. N'ikwu nke a, na alụmdi na nwunye Katọlik ga-abụ usoro iwu na-esote. Lee, oge owu kachasị na ndụ nkịta.
N'ikwu eziokwu, Manuel na Thessalonica chọrọ ka Nkịta a bụrụ enyi. Nke a bụ ikpe na-ezighị ezi.
Ndụ Manuel Locatelli:
Onye Etiti nke Italy na-enweta ọtụtụ ego, agbanyeghị, ọ bụghị mgbe ihe ụtọ nke ndụ okomoko. Chọta n'okpuru, ụgbọ ala Manuel Locatelli. Ọ dị mfe, na-ese nkezi. Ọ bụ ihe ịrịba ama doro anya na Italiantali bụ ọgwụ mgbochi iji gosipụta okomoko - n'agbanyeghị nnukwu ụgwọ ya.
Nke a bụ ụgbọ ala Manuel Locatelli. Ọ bụghị mgbe okomoko.
Ememe ezumike na Tesalona Lacovich:
Locatelli na-ahụ ọzara ma ọ bụ ala kpọrọ nkụ dị egwu dị ka ụzọ o si ele anya n'akụkụ oké osimiri.
N'ihi nke a, onye na-eme egwuregwu na-ahụ na ezumike mmiri na nke ụwa bụ ihe doro anya maka ya na nwanyị nke ndụ ya - Tesalonaịka. Lelee ebe mara mma nke na-eme ka ọnọdụ maka nnụnụ ịhụnanya abụọ ahụ.
Manuel Locatelli na-ezumike oge iji nwee echiche ka mma maka ndụ na onye hụrụ ya n'anya - Thessa.
Ndụ nke Manuel Locatelli:
N'akụkụ a, anyị ga-agwa gị ihe nzuzo banyere ya nke dị anya na football. Ọ bụ ihe anyị kwenyere na ị maghị maka kpakpando Italiantali.
Tupu anyị agaa, ka m jụọ gị… noticed chọpụtala mmegharị aka nke Onye bọọlụ mgbe ọ kụrụ azụ ụgbụ onye iro ya? .. Ugbu a, ka anyị gaa n'ihu.
Manuel Locatelli Ememme Mgbaru Ọsọ - Akwụkwọ Ozi Letter T:
Ihe Ememme Mgbaru Ọsọ Manuel Locatelli pụtara - KỌWARA.
Site na foto dị n'elu, ọ ga-abụrịrị na ị ghọtara ihe. Na ya 'Ememe T leta' amaliteghị n'oge Euro 2020.
Manuel Locatelli gosipụtara mmegharị aka ndị a na Sassuolo ọbụlagodi tupu asọmpi Euro 2020. N'ịkọwa ihe kpatara emume mgbaru ọsọ ya, nwa afọ Lecco ahụ gwara ndị nta akụkọ egwuregwu;
Akwụkwọ ozi T bụ maka ndị Tesalonaịka, onye ibe m. Ọzọkwa maka Teddy, obere nkịta m nke na-adịghị nwute.
Ogbenye Teddy. Gị na ndị Tesalona bụ ihe kpatara Manuel Letter T.
Na profaịlụ Instagram ya, Manuel Locatelli ruru uju maka nkịta ya site na ịdebe ozi na-emetụ n'ahụ. N'okwu ya;
Teddy, enwere m ike ịsị I meela. Ekele dịrị m maka ịkụziri m ihe ọ pụtara ịhụ anụmanụ n’anya.
Have na-a kediegwu nkịta na mụ na Thessalonica nwere ihu ọma na m zutere gị na ndụ m.
Ga-anọ m n’obi. Nwee ọmarịcha njem nwa nkịta m.
Ndụ Manuel Locatelli Ezinụlọ:
Maka nwa afọ Lecco, inwe ezinụlọ na-akwado ya bụ otu n'ime ngọzi kasịnụ nke ndụ ya. N'ezie, ndị na-agba bọọlụ agaghị ama ya ma ọ bụrụ na ndị mụrụ ya (ọkachasị papa ya) enweghị ntọala siri ike maka ọrụ ya. N'ebe a, anyị ga-agwa gị gbasara ndị ezinụlọ ya.
Banyere Manuel Locatelli Nna:
Otu nkowa ihe eji aru oru nke okwu a bu 'Sacchu aja' bu: givinghapụ ihe nwa oge dị mma maka ihe ga-adị mma karịa mgbe ebighị ebi. Nke a na-akọwa njirimara Emanuele Locatelli. Ọ bụrụ n'icheta, ọ bụ ya ka ọ dụrụ ọzụzụ ịzụ ụmụ ya nwoke - na mbido ọrụ ha.
Zute Manuel Locatelli Nna - nwoke nke chụrụ ihe niile maka ya.
Nchoputa emere na Emanuele Locatelli bu nwoke nwere mmetuta obi. N'otu oge, nna nke ụmụ atọ na-ebe akwa n'esepụghị aka (n'ụgbọ ala ya). O mere n'oge ahụ Manuel Locatelli bịanyere aka na nkwekọrịta ọkachamara mbụ ya.
N'ịkọwara onye nta akụkọ egwuregwu na etu o si metụta papa ya, Manuel kwuru otu oge;
Nna m sịrị, ka anyị gaa nwa.
anyị wee banye n’ụgbọala ọnụ. Anyị na-ele ibe anyị anya na mgbe ahụ, ọ na-enwe nkụda mmụọ.
Banyere Manuel Locatelli nne:
Mgbe nwa gị nke ọdụdụ ga-enwe ihe ịga nke ọma ma bụrụ onye a ma ama, ọrụ gị dị ka mama gafere. Nke a bụ mmetụta nke Manuel Locatelli Mum - Simona.
Enwere okwu na ndị ikpeazụ a mụrụ nke ezinụlọ na-abịarukwu nne ha nso. Eziokwu bụ, ọ naghị eju anyị anya ịhụ Manuel na Simona nọ nso ebe a.
Ọ bụ nwa ahụ ụlọ. Ọ bụghị ihe ijuanya, ọ bụ akpa aka Mummy.
Uelmụnne Manuel Locatelli:
Emanuele na Simona zụlitere ụmụaka ndị nwere ihe ịga nke ọma na ụzọ ọrụ ha.
N'etiti ụmụnne Manuel Locatelli, anyị na-achọpụta na o yiri ka ọ nwere mkpụrụ ndụ toro ogologo n'agbanyeghị na ọ dị mkpụmkpụ - n'oge ọ bụ nwata. Ugbu a, ka anyị kọọrọ gị gbasara Mattia na Martina.
Simmụ Simona na Emanuele bụcha ndị tozuru etozu. Manuel dị mkpụmkpụ n’oge ahụ. Ọ bụ dimkpa ugbu a.
Banyere Manuel Locatelli Nwanna - Mattia:
Ọ bụ nwa mbụ n’ime ezinụlọ ahụ. Dị ka nwanne ya nwoke, Mattia ghọkwara ọkachamara n'ịgba ọsọ - onye ka na-egwuri egwu dị ka onye egwu. A na-ese ya na nwunye ya, Arianna Bonfanti - onye ọka iwu.
Zute Manuel Locatelli Nwanna - Mattia. Ọ bụ ndị ọgba bọọlụ, nweela nwunye mara mma.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị onye na-elekọta ezinụlọ na ihe ịga nke ọma dị ka Manuel, Mattia emeela nke ọma na ndụ. Ọ na-agba bọl ya dị ka onye na-eti Sondrio Calcio, US Inveruno na obodo ezinụlọ ya - Lecco.
N’ụzọ na-aga nke ọma, Nwanna Manuel Locatelli nwere mmechuihu ụfọdụ. Nke ahụ mere ka Mattia tinye foto a na Instagram ya na ihe odide ahụ;
Mattia Locatelli kesara ụfọdụ oge ọjọọ ya.
Mgbe ụfọdụ, nkịta na-etinyere ọdụ ya nwere ezigbo obi karịa nwoke na-amụmụ ọnụ ọchị.
Ugbu a ajụjụ bụ; onye na-akowa Mattia?
Banyere Nwanyị Manuel Locatelli - Martin:
Dị ka ọtụtụ ụmụ e buru ụzọ mụọ nke ezinụlọ, o setịpụrụ ihe nlereanya site na ihe nlereanya. Taa, a na-eme Martina nke ọma dịka nwanne ya nwoke, Manuel.
Ọ bụrụ na ị maghị, ọ bụ onye njide akara doctoral (PhD). Manuel kọwara Dr Martina dị ka onye ọ bụla ga-achọ inwe dịka nwanne.
Banyere Manuel Locatelli Nwanyị - Martina. Onye na-eto eto PhD bụ ihe atụ dị ndụ nke onye nwere ma mma ma ụbụrụ.
Manuel Locatelli Eziokwu Eziokwu:
N'ịga njem n'ime akụkọ ndụ ya, anyị ga-eji ngalaba ngwụcha nke akụkọ ndụ anyị wepụta ozi ndị ọzọ gbasara ya. Kpọọ na-enweghị n'ihu ado, ka na-amalite.
Eziokwu # 1 - Manuel Locatelli papa m hiere ụzọ maka nwoke ọzọ:
N'oge ya na ụlọ akwụkwọ mmuta AC Milan, ọtụtụ ndị chere na ọ bụ nwa nke klọb ịgba egwu na-egwu egwu, Tomas Locatelli. Nke a bụ n'ihi na ha yiri ezigbo ụdị na eziokwu ahụ bụ na ha abụọ nwere otu aha nna.
N'otu oge, Manuel Locatelli Papa hiere ụzọ maka nwoke a.
Mgbe ọ na-aza ajụjụ ọnụ, Tomas Locatelli kwuru otu oge;
Onye ọ bụla na-ajụ m ma Manuel bụ nwa m nwoke na nwute na m ga-asị mba. Ọ dị m ka ya bụrụ.
Eziokwu # 2 - Manuel Locatelli rygwọ ọnwa ụgwọ na atụnyere:
Ebe ọ bụ na ị lere Manuel Locatelli'Bio, nke a bụ ihe ọ rụpụtara na Sassuolo.
Manuel Locatelli Sassuolo rygwọ ọnwa Salagwọ na Euro (€)
Kwa Afọ :: € 1,666,560
Ọnwa kwa: € 138,880
Kwa Izu: € 32,000
Kwa :bọchị: € 4,571
Kwa elekere: € 190
Nkeji nkeji: € 3
Sekọnd ọ bụla: € 0.05
Ebe o si bia, nkezi ndị Italiantali na-eme € 22,424 kwa afọ ga-arụ ọrụ maka afọ ise na ọnwa isii iji nweta ụgwọ ọrụ Manuel Locatelli nke Sassuolo.
Eziokwu # 3 - forhụnanya maka South Africa:
Manuel Locatelli bụ nnukwu onye na-akwado mba ahụ. N'otu n'ime njem AC Milan, o jiri ohere gaa leta ụlọ akwụkwọ ebe ya na ụmụaka nwere ọ theụ. Manuel kpọrọ nke a oge a na-agaghị echefu echefu.
Manuel Locatelli hụrụ Africa n'anya.
Eziokwu # 4 - Manuel Locatelli Profaịlụ:
Onye na-eme egwuregwu na-echetara ndị na-agba bọọlụ Claudio Marchisio o nwekwara àgwà ndị yiri ya Leon Goretzka.
Dika edere ya site na ntuziaka SOFIFA June 2021, Locatelli bụ onye na-eme egwuregwu nke ọma nke nwere àgwà niile sitere na ike, echiche, ịgbachitere, ịwakpo wdg.
Eziokwu # 5 - Manuel Locatelli Okpukpe:
Euro 2020 a mụrụ ma zụlite ya na ezinụlọ Katọlik nwere mmụọ. N'oge ọ bụ nwata, ọ bịara doo anya na nne na nna Manuel Locatelli mere ka ya na Mattia gbaa bọọlụ ya na mpaghara bọọlụ mpaghara nke ụlọ ụka Katọlik.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke banyere Manuel Locatelli. Ọ na - enye gị ikike ịbelata site na profaịlụ ndị ọgba bọọlụ Italiantali na-enweghị nsogbu.
Aha zuru ezu: Manuel Locatelli
aha otutu: New Pirlo na Loca
Ụbọchị ọmụmụ: Ụbọchị 8th nke January 1998
Ebe amụrụ onye: Lecco, Italytali
Age: 23 afọ na ọnwa 9.
Ndị nne na nna: Simona Locatelli (Nne) na Emanuele Locatelli (Nna)
Ụmụnne: Mattia Locatelli (Nwanna) na Martina Locatelli (Nwanne nwanyị)
Enyi / Nwunye ka ọ buru: Ndokwa Lacovich
elu: 1.86 mita ma ọ bụ 6 ụkwụ 1 sentimita asatọ
Net Net (2021): Nde Euro 5
Onye nnọchite anya: Castelnovo
Egwuregwu Ọnọdụ: Ebe Etiti na Ebe Nchebe
Education: USD Olginatese, Atalanta na AC Milan agụmakwụkwọ.
Na - Ewu:
Mgbe anyị na-ede Manuel Locatelli Biography, anyị mụtara ihe ndị a. Nke mbụ bụ na anyị ekwesịghị ikwe ka ọjụjụ anyị mee ka anyị nwewe obi abụọ n’ime onwe anyị.
Ọ bụrụ n’icheta, AC Milan jụrụ ịrịọ arịrịọ ya ka ọ bụrụ onye na-amalite mgbe niile maka otu egwuregwu mbụ ha. N'agbanyeghị nke ahụ, Manuel enweghị obi abụọ na ọ ga-ebuga ebe ọzọ - ebe a ga-enwe ekele maka ya.
Nke abuo, Manuel Locatelli Bio na-ezipụ ozi na - anyị ekwesịghị ịtụ ụjọ ịgbanwe. Cheta, ọ tụfuru nrọ Rossoneri ya mana ọ ga-enweta ihe ka mma.
N'ikpeazụ, ọ dị mkpa ka Lifebogger nwee ekele maka Emanuele Locatelli (Super papa) onye rụrụ ọrụ ntọala na ndụ nwa ya. N'ezie, mmetụta nke ndị nne na nna Manuel Locatelli na ndụ ya enweghị ike jupụta mmadụ ọ bụla.
Daalụ maka iso anyị na-aga njem ruo ugbu a n'ogologo ogologo nke Akwụkwọ ndụ ndụ. Na Lifebogger, anyị na-eche banyere izi ezi nke isiokwu anyị na ndị na-agba bọọlụ Italiantali.
Biko gakwuru anyị (site na ịkpọtụrụ), ọ bụrụ na ị hụ ihe ọ bụla nke anyị edebeghị nke ọma. N'ikpeazụ, anyị ga-enwe ekele maka ya ma ọ bụrụ na ị nye anyị nzaghachi gị gbasara Bioballer's Bio - na ngalaba nkọwa.
Akwụkwọ akụkọ Sassuolo